Feature အသစ်တွေပါဝင်လာတဲ့ YouTube app update အသစ် – AsiaApps
May 10, 2018 May 10, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Feature အသစ်တွေပါဝင်လာတဲ့ YouTube app update အသစ်
“Largest video platform” ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouTube ဟာတော့ သူ့ရဲ့ YouTube app အတွက် update အသစ်တစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကဒီ Update မှာပါဝင်လာတဲ့ Feature အသစ်တွေဟာ User တွေဘက်ကိုစဉ်းစားပြီး ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်. YouTube app မှာကြီးပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအဖို့ စဉ်းစားပြီးထည့်သွင်းပေးထားတာလို့ဆိုရမှာပါ။ Feature အသစ်တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်ပါပြီ…..
YouTube app ကပို့မယ့် Notification တွေရဲ့ အသံနဲ့ တုန်ခါမှုကို ဖျောက်ဖျက်ပေးမယ့် Feature ပါ။ Disable ကိုအချိန်နဲ့ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီး Default setting ကတော့ နံနက် ၈ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီအထိလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ (သတ်မှတ်ချိန်ထက်ကျော်လွန်သွားရင်တော့ သူ့အလိုလို Enable ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။) စတင်ချိန်နဲ့ ပြီးဆုံးချိန်ကို မိတ်ဆွေ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Android/ iOS (Settings -> Notifications -> Disable sounds & vibrations)
YouTube က Live stream, upload, comment အစရှိတဲ့ တစ်ရက်လုံးစာ Notification အားလုံးကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ အချက်ပြအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် Feature ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်လုံးစာ Notification အားလုံးကိုစုပြီး အသိပေးမယ့်အချိန်ကိုတော့ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
Android/ iOS (Settings -> Notifications -> Scheduled digest)
ဒီ Feature ကတော့ YouTube app ကိုအချိန်အတိုင်းအတာနဲ့အသုံးပြုနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်၊ ၃၀ မိနစ်၊ ၆၀ မိနစ်၊ ၉၀ မိနစ်၊ ၁၈၀ မိနစ် အစရှိတဲ့အချိန်တွေထဲကတစ်ခုကို Alert အနေနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ Alert အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင် မိတ်ဆွေကြည့်နေတဲ့ ဗီဒီယိုကို ခေတ္တရပ်တန့်ပြီး သတိလာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ရပ်တန့်ပြီး လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်မလား (သို့) ဆက်ကြည့်မလား ကတော့ မိတ်ဆွေသဘောပါပဲ ?)
Android (Settings -> General -> Remind me to takeabreak)
iOS (Settings -> Remind me to take)
ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးသွားတာတွေကတော့ YouTube app (13.17.8 version) မှာပါဝင်တဲ့ Feature အသစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးတည့်လှတဲ့ Feature အသစ်တွေပဲဖြစ်တာကြောင့် ဘော်ဘော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Android, iOS, Smartphone app, YouTube